Guddoomiyaha Guddiga doorashooyinka Qaranka oo faah faahisay nuuca doorasho ee Soomaaliya ka dhici doonto – Kalfadhi
Guddoomiyaha Guddiga doorashooyinka Qaranka oo faah faahisay nuuca doorasho ee Soomaaliya ka dhici doonto
Guddoomiyaha Guddiga doorashooyinka Qaranka Xaliima Ismaaciil Ibraahim, oo loo yaqaano Xaliima Yareey ayaa maanta khudbad ka horjeedisay fadhiga Xildhibaanada Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya waxayna faah faahin ka bixisay doorashada la filayo in ay Soomaaliya ka dhacdo dhamaadka sanadka 2020-ka.
Xaliima Ismaaciil ayaa sheegtay in aysan dhici doonin doorasho ku saabsan nidaamka qabaliga ah ee 4.5, islamarkaana aysan jiri doonin Xildhibaan ay soo doortaan 51 qof markii la gaaro dhamaadka sanadka 2020-ka.
“Sanadka 2020-ka markii la gaaro ma jiri doonto Xildhibaan ay soo dooranayaan beeshiisa laakiin waxaan rabnaa in uu ku soo baxo codeyn dadweyne oo xisbi ah” ayey tiri Xaliimo Ismaaciil Ibraahim (Xaliimo Yareey) oo maanta ka hor hadashay Xildhibaanada Aqalka Sare.
“Waxaa jirta goobo gaar ah oo aan u diyaarin doono in ay ka dhacaan doorashooyinka dalka sida magaalooyinka ay ka taliso dowladda iyo maamulada, waxaana halkaas geyn doonaa danaadiiqda codeynta” ayey tiri Xaliimo Ismaaciil oo ag Guddoomiyaha Guddiga doorashooyinka Qaranka Soomaaliya.
Senatoro katirsan Xildhibaanada Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa Guddoomiyaha Guddiga doorashooyinka Qaranka waydiiyay sida laga yeelayo Xildhibaanada ka imaanaya doorashada soo socata degaanada Waqooyi ee Soomaaliland maadaama aysan dadka degaankaasi doorasho ka qayb gali doonin waqti dhow.
“Siyaasiinta Soomaaliland ka soo jeeda waa in ay galaan Xisbiyo siyaasadeed waxaana kadib u codeyn doona shacabka Soomaaliyeed ee waqooyiga ama koonfurta maadaama qabiil laga gudbay” ayey tiri Xaliimo Ismaaciil Ibraahim oo ka hadashay kulanka Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Dhinaca kale Senatorro katirsan Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa Guddoomiyaha Guddiga doorashooyinka Qaranka Xaliima Ismaaciil Ibraahim waydiiyay waxay kala socoto sharciga doorashooyinka Qaranka oo ay dhawaan ansixiyeen Golaha Wasiirada Soomaaliya kadib markii la sheegay in ay soo diyaariyeen guddiga doorashooyinka Qaranka.
“Waa been, annaga wax shaqo ah kuma lihin Sharci doorasho waxaana laga rabaa soona diyaariyay Wasaaradda Arimaha Gudaha Soomaaliay” ayey ku jawaabtay Xaliima Ismaaciil Ibraahim Xaliima Yarey.
Golaha Shacabka oo maanta ka doodaya Sharciga Batroolka